Banyere Anyị - Linyi Chenyu New Material Co., Ltd.
Linyi Chenyu New Material Co., Ltd hiwere na 2000, dị na Linyi City, nke a maara dị ka "Obodo ama ama azụmahịa" na "lọjistik Capital", ebe emepere njem ụgbọ njem, nnyefe dị mfe, bụ mkpokọta nnukwu azụmahịa.
Anyị bụ nnukwu onye nrụpụta ihe ọhụrụ nke bụ ọkachamara na mmepụta nyocha na azụmaahịa nke elu na etiti ọkwa otu na akụkụ aluminom-plastik okpukpu abụọ, veneer aluminom also nwekwara ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.Our ụlọ ọrụ anyị nwere nnwere onwe mbubata na mbupụ nri. A na -ebupu ngwaahịa anyị n'ihe karịrị mba 30 na mpaghara ụwa niile, gụnyere North na South America, Europe, Africa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ndị ahịa wee too ya nke ukwuu.
The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ agadi ọkachamara na oru pesonel na management, ahịa na ndị ọzọ J.Randall, kasị elu akpaka ọkụ na-ekpo ọkụ mejupụtara aluminum mmepụta akara, elu-ọsọ mkpuchi mmepụta akara na-akwado ụlọ ọrụ, ka hụ na magburu onwe ya mma na asọmpi uru nke bọọdụ plastik nke Chenyu, ọ bụrụla otu n'ime ụdị ama ama ama na ụlọ ọrụ bọọdụ aluminom.
N'ịga asọmpi ahịa kpụ ọkụ n'ọnụ, ụlọ ọrụ chenyu ga-adabere na teknụzụ ọkaibe, akụrụngwa klaasị mbụ, ndị ọrụ nwere oke mma, ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, ọrụ ndị ahịa na-eju afọ, na ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile iji gboo mkpa ahịa, ka ha wee merie ma lekọta ya. uru asọmpi na ụlọ ọrụ.
Chenyu nwere akụrụngwa mmepụta klaasị ụlọ mbụ yana akụrụngwa nyocha zuru oke. Anyị na -agbaso ụkpụrụ “ịdị mma mbụ, ndị ahịa buru ụzọ”. Onye kacha baa ọgaranya na -agba mbọ ịkwalite ogo ngwaahịa na ọrụ site na ihe ọhụrụ na teknụzụ na ọrụ.
Chenyu enwetala ndị otu nwere ihe ọmụma ngwaahịa ọkachamara, na-enye gị ọrụ ịre ahịa kacha mma, nke na-emeri otuto onye ahịa. Anyị nwere ike nye ọrụ asụsụ dị iche iche, dị mfe maka ijikọ, dị ka Bekee, Russia, Japan, Korea, Spain ect.
Netwọk ahịa anyị gụnyere ala China, America, Asia, South Asia, Europe, Middle East, wdg Anyị enwetala ezigbo aha n'ahịrị na mbọ afọ iri. Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị nyere na -eji n'ọtụtụ ebe na -apụta dị ka injinị ihe owuwu, ịchọ mma, wdg.
Ọhụụ anyị bụ ịghọ ụlọ ọrụ asọmpi zuru ụwa ọnụ ma bụrụ onye isi nke ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Site n'ụkpụrụ nke "onye ahịa mbụ, ọrụ mbụ, ịkwụwa aka ọtọ na mbụ", Chenyu gbara mbọ inye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ kacha mma.
Ndị ọrụ anyị na-asọpụrụ ịdị n'otu, agụụ, nnọgidesi ike, ịkekọrịta, echiche mmeri, anyị ga-ejikọ ndị niile nwere ike ịdị n'otu, nwee oke agụụ na ịrụ ọrụ nke ọma ịrụ ọrụ anyị. Ịkekọrịta amamihe anyị, ịrara ndị otu anyị nye, na imecha nweta ọnọdụ mmeri nke ndị ahịa, ndị ọrụ na ụlọ ọrụ.
N'ihi nkwado ndị ahịa anyị na-aga n'ihu na ndị raara onwe ha nye na akụkọ ihe mere eme ya niile, guzobe mmekorita atụmatụ na ihe karịrị ụlọ ọrụ ụlọ 20 a ma ama, dị ka otu Evergrande 、 Wanke 、 Wanda, wdg. Ihe ndabere maka imekọ ihe ọnụ nke ọma na ndị mmekọ na -enwe nkwekọrịta bara uru, yabụ na ọ bụ maka ọdịmma nke ndị abụọ ahụ ka ha na -aga n'ihu na -arụ ọrụ mmekọrịta dị mma.
Ihe kacha mkpa chenyu bụ mmepe na -aga n'ihu na mgbasawanye nke ụdị ngwaahịa enyere, mmejuputa echiche dị mkpa n'ahịa yana imepụta ngwaahịa ọhụrụ. Ikike na nka nke ụlọ ọrụ ahụ na usoro ịsọ mpi asọmpi na -asọ mpi na -etolite ntọala mmekọrịta dị mma n'etiti anyị na ndị ahịa anyị.